Nifandray tamin'i Kroasia ny seranam-piaramanidina Budapest
Home » Vaovaon'ny seranam-piaramanidina » Nifandray tamin'i Kroasia ny seranam-piaramanidina Budapest
Nanamafy ny seranam-piaramanidina Budapest fa hifandray amin'i Kroasia indray izy amin'ity fahavaratra ity aorian'ny fiatoana 13 taona. Manambara ny serivisy fizaran-taona nataon'i Ryanair any Zadar, ny renivohitra Hongroà dia hanolotra rohy indroa isan-kerinandro mankany amin'ny morontsirak'i Dalmatian hatramin'ny 2 Jolay.
"Ny fampidirana an'i Kroasia amin'ny tamba-jotra misy antsika dia vaovao mahafinaritra, indrindra ho an'ny fizahan-tany any amin'ireo tanàna roa ireo - Hongroà mihoatra ny antsasaky ny tapitrisa no nitsidika ny firenena atsimo atsinanan'i Eropa tamin'ny taon-dasa," hoy ny fanazavan'i Balázs Bogáts, Lehiben'ny Fampandrosoana Airline, Seranam-piaramanidina Budapest. “Ny tanàna manan-tantara ao Zadar miaraka amin'ny tanànany taloha misy ny rava romanina, ny fiangonana antenantenany ary ny cafe cosmopolitan dia nanjary mahasarika olona hongroàans nandritra ny taona maro izao ary ho valiny dia nahita ny isan'ny mpitsidika kroaty ilay tanànantsika tsara tarehy nitombo be izahay. Ny sidin'i Ryanair eo anelanelan'ny toerana fizahan-tany roa malaza dia tsy isalasalana fa be fangatahana mandritra ny fahavaratra, ”hoy hatrany i Bogáts.
Manomboka ny fandaharam-potoanan'ny fahavaratra, Ryanair hiasa ny zotra avy any amin'ny base Lauda vaovaony - ny zana-tsakan'ny mpitatitra vola lany (LCC) - ao Zadar. Manolotra seza 300K fanampiny mandritra ny vanim-potoana fara-tampony, ny LCC Irlandy dia iray amin'ireo kaompaniam-pitaterana haingana indrindra ao amin'ny seranam-piaramanidina Budapest amin'izao fotoana izao miaraka amina toerana 58 any amin'ny tambajotrany Hongroà.
Ny fiovana dia eny amin'ny habakabaka ao amin'ny Hotel Adlon Kempinski Berlin
Miroso amin'ny drafitra fanarenana indray i South Africa Airways